OTU ESI EHICHAPU LAPTỌỌPỤ NA KEYBOARD KEYBOARD N'ỤLỌ - WINDOWS - 2019
Anyị na-ehichapụ keyboard n'ụlọ
Ndị ọrụ na-arụ ọrụ na Microsoft Okwu site n'oge ruo n'oge nwere ike izute nsogbu ụfọdụ. Anyị ekwuolarịrị banyere mkpebi nke ọtụtụ n'ime ha, mana anyị ka dị anya site n'ịtụle ma na-achọ ngwọta nke onye nke ọ bụla n'ime ha.
N'isiokwu a, anyị ga-atụle nsogbu ndị na-ebili mgbe ị na-anwa imepe faịlụ "onye mba ọzọ," ya bụ, nke ị na -ghị ekepụta maọbụ nke ebudatara na Intanet. N'ọtụtụ ọnọdụ, faịlụ dị otú ahụ nwere ike ịmere, ma ọ gaghị edozi, ma e nwere ihe abụọ kpatara nke a.
Ihe kpatara ederede a
Ihe mbụ kpatara ya bụ njedebe arụmọrụ (nke na-ejikọta). Ọ na-agbanye mgbe ị na-agbalị imeghe akwụkwọ edepụtara na mbipụta nke ochie nke Okwu karịa nke eji na kọmputa. Ihe nke abuo bu na enwegh ike idezi ihe edere n'ihi eziokwu na echere ya.
Anyị ekwuolarịrị maka ịmepụta nsogbu ncheta (arụmọrụ kachasị) (njikọ dị n'okpuru ebe a). Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe gị, ntụziaka anyị ga - enyere gị aka mepee akwụkwọ dị otú ahụ maka edezi. Kpọmkwem n'isiokwu a, anyị ga-atụle ihe nke abuo ma nye azịza nke ajụjụ nke ihe kpatara ederede ederede, na-agwa gị otu esi edozi ya.
Ihe omumu: Esi gbanyụọ njedebe ọrụ arụmọrụ na Okwu
Mmachibido iwu ederede
N'okwu ederede nke a na-apụghị edezi, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ihe niile dị na nchịkwa ngwa ngwa adịghị arụ ọrụ na taabụ niile. A pụrụ ile akwụkwọ dị otú ahụ anya, ọ nwere ike ịchọ ọdịnaya, ma mgbe ị gbalịrị ịgbanwe ihe dị na ya, ọkwa ga-apụta "Mgbochi Ndozi".
Ihe omumu: Chọọ ma dochie okwu na Okwu
Ihe omumu: Ihe igodo igodo
Ọ bụrụ na mmachibido iwu ederede na-edozi "iwu," ya bụ, akwụkwọ ahụ abụghị nchekwa paswọọdụ, mgbe ahụ, mmachibido iwu ahụ nwere ike gbanyụọ. Ma ọ bụghị ya, ọ bụ naanị onye ọrụ nke arụnyere ya ma ọ bụ onye nchịkọta nke otu (ọ bụrụ na faịlụ ahụ kere na netwọk mpaghara) nwere ike mepee nhọrọ nhazi.
Rịba ama: Rịba ama "Nchedo Akwụkwọ" gosipụtara na nkọwa faịlụ.
Rịba ama: "Nchedo Akwụkwọ" debe na taabụ "Nyochaa"emeziri iji kwado, tụnyere, dezie ma jikọta na akwụkwọ.
Ihe omumu: Nyocha ndị ọgbọ na Okwu
1. Na windo "Mgbochi Ndozi" pịa bọtịnụ ahụ "Gbanyụọ Nchebe".
2. Na ngalaba "Mgbochi na nhazi" nyochaa ihe "Na-enye naanị usoro a kapịrị ọnụ nke edezi akwụkwọ" ma ọ bụ họrọ nchịkọta achọrọ n'ime menu ndapụta nke bọtịnụ dị n'okpuru ihe a.
3. Ihe niile dị na taabụ niile na oghere ngwa ngwa ga-arụ ọrụ, ya mere, a ga-edezi akwụkwọ ahụ.
4. Mechie panel "Mgbochi Ndozi", mee mgbanwe ndị dị mkpa na akwụkwọ ma chekwaa ya site na ịhọrọ na menu "Njikwa" ìgwè Zọpụta Dị ka. Kọọ aha faịlụ, kọwaa ụzọ na folda ịchekwa ya.
Ọzọkwa, iwepụ nchedo maka edezi ga-ekwe omume nanị ma ọ bụrụ na akwukwọ ahụ ị na-arụ ọrụ abụghị nchekwa paswọọdụ ma onye nchekwa nke onye ọrụ atọ anaghị echekwa ya n'okpuru akaụntụ ya. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka okwu mgbe edeturu paswọọdụ na faịlụ ahụ ma ọ bụ na o nwere ike idezi ya, n'amaghị ya, ị nwere ike ịme mgbanwe, ma ọ bụ na ị nweghị ike mepee ederede ederede.
Rịba ama: A na-atụ anya ihe gbasara ụzọ isi wepụ nchedo paswọọdụ site na faịlụ Word na weebụsaịtị anyị n'ọdịnihu.
Ọ bụrụ na gị onwe gị chọrọ chebe akwụkwọ ahụ, machibido ohere nke edezi ya, ma ọ bụ ọbụna igbochi mmeghe ya site na ndị ọrụ atọ, anyị na-akwado ịgụ ihe anyị na isiokwu a.
Ihe omumu: Otu esi echedo ihe ederede na okwuntughe
Mwepụ nke mmachibido iwu na nhazi na ihe ndekọ akwụkwọ
Ọ na-emekwa na nchebe maka edezi adịghị edozi na Microsoft Okwu n'onwe ya, kama na faịlụ faịlụ. Mgbe mgbe, iwepụ nkwụsị dị otú ahụ dị mfe. Tupu ịga n'ihu na nhazi ahụ akọwapụtara n'okpuru, jide n'aka na ị nwere ikike nchịkwa na kọmputa gị.
1. Gaa na folda ahụ na faịlụ ị na-enweghị ike idezi.
2. Mepee ihe onwunwe nke akwụkwọ a (pịa nri - "Njirimara").
3. Gaa taabụ "Nchebe".
4. Pịa bọtịnụ ahụ. "Gbanwee".
5. Na windo ala na kọlụm "Kwe ka" lelee igbe "Nweta zuru ezu".
6. Pịa "Tinye" wee pịa "OK".
7. Mepee akwụkwọ, mee mgbanwe ndị dị mkpa, zọpụta ya.
Rịba ama: Usoro a, dịka nke gara aga, adịghị arụ ọrụ maka faịlụ echekwara site na paswọọdụ ma ọ bụ ndị ọrụ ndị ọzọ.
Nke ahụ bụ, ugbu a, ị maara azịza nye ajụjụ nke ihe kpatara ederede ederede na otú, na ụfọdụ, ị ka nwere ike ịnweta nhazi ederede dị otú ahụ.